Sida loo sameeyo xarfaha quruxda badan ee boodhadhka | Hal-abuurka khadka tooska ah
Sida loo sameeyo xarfaha quruxda badan ee boodhadhka
In ka badan hal mar ayaanu aragnay boodhadh dareenkeena soo jiitay, ma aha oo kaliya munaasabadda ay ku dhawaaqeen, laakiin sidoo kale sababta oo ah nooca xarfaha. Waxaadna is waydiinaysay sida uu u ekaan doono calaamada ganacsigaaga haddii aad hirgeliso fartaas. Laakiin, Sidee loo sameeyaa xarfaha quruxda badan ee boodhadhka?
Jawaabtu badanaa waa sahlan tahay: aad internetka oo raadso far qurux badan. Laakiin runtu waxay tahay in ay jiraan siyaabo badan oo loo sameeyo, oo aan iyaga ka koobiyn kuwa kale. Ma rabtaa inaad ogaato sida?
1 Habka dhaqanka ee aynu illownay: gacmaheena
2 Siyaabo kale oo loo sameeyo xarfo qurux badan
2.1 Xarfaha quruxda badan ee boodhadhka oo aad soo dejisan karto
2.2 Xayawaanka Xayawaanka ah
2.3 Dareen Qabasho
2.5 Bloom qurux badan
3 Talooyin loogu talagalay doorashada xarfaha quruxda badan ee boodhadhka
Habka dhaqanka ee aynu illownay: gacmaheena
Marar badan, marka ay tahay inaan wax qabsanno, waxaan had iyo jeer ka baadhnaa internetka qaab naga caawinaya inaan helno waxa aan raadineyno sida ugu fudud ee suurtogalka ah. Y Waxaan iloobin in haddii aan nafteena samayno in aynaan kaliya abuuri lahayn wax gaar ah, laakiin in aan haysano qalabka lagama maarmaanka ah si aan u noqono hal abuur.
Sidaa darteed, mid ka mid ah hababka ugu horreeya ee loo sameeyo xarfaha quruxda badan ee boodhadhka waa in aan isticmaalno gacmaheena iyo madaxdeena si aan u fekerno oo aan u samayno xarfahaas. Sideen u maareynaa in aan sameyno? Hagaag, waxaanu haynaa dhowr habab:
Waxa uu noqday mid aad moodo oo waa farshaxan ay dad badani isticmaalaan si ay u nastaan ​​(sida crochet, puzzles ama wixii la mid ah). Xarfaha waa farshaxanka xarfaha sidaas awgeedna waxay ku baraysaa aasaaska si aad u abuurto xarfo qurux badan boodhadhka ama wax kasta oo aad u baahan tahay. Natiijadu waa cajiib, mar hore ayaan kuu sheegnay.
Waxaad awoodi kartaa Isticmaal qaar ka mid ah moodooyinka ku jira internetka haddii aad tahay qof bilow ah oo aanad garanayn sida si fiican loogu shaqeeyo ama, haddii aad hore u lahayd fikrad, isku day in aad samaysato naqshadahaaga.
Sidoo kale, marka aad sameyso heesaha waxaad ku sawiri kartaa kombayutarka oo aad u rogi kartaa far si aad u isticmaasho (adigoon gacanta ku samayn mar kasta oo aad rabto inaad isticmaasho fartaas).
Midda ugu wanagsanna waxa weeye, maadaama uu yahay shay aad abuurtay, in aanay jirin cid haysata oo la mid ah, haddii ay wax ka soo baxaanna ay kaa dambeeyaan. Asal ahaan iyo saamayn noocee ah ayaad leedahay.
Waxaan dhihi karnaa taas farshaxan-yaqaanku waa aasaaska wax kasta sababtoo ah xarafaynta lafteeda ayaa qayb ka ah tan. Laakin ma aha wax cusub, mar haddii nashqaddeedu ay ku salaysan tahay xarfaha hore loo isticmaali jiray (Giriig, Roomaan...) oo macneheedu yahay "koobiyeeynta" wax horay u jiray.
Beddelka, waxaad helaysaa a farta wax lagu qoro oo muujinaya in gacan lagu sameeyey oo ay tahay mid gaar ah. Sababtoo ah ma jiraan laba xaraf oo weligood isku mid ah.
Halkan maaha wax badan oo lagu sawirayo erayada, laakiin erayada laftoodu waxay noqonayaan farshaxankaas.
Siyaabo kale oo loo sameeyo xarfo qurux badan
Marka lagu daro iyaga oo iyaga gacanta ku abuuraya, siyaabo kale oo aad u leedahay inaad abuurto xarfo qurux badan ayaa online ah, taas oo ah, internetka.
waxaad ka heli kartaa qaar boggaga internetka kuwaas oo ay ku soo saari doonaan farta asalka ah iyada oo loo marayo kuwa kale ama waxaad ku habeyn kartaa iyaga adigoo abuuraya naqshadahaaga.
Tusaale ahaan, waxaad leedahay:
Waraaqaha iyo farta.
Xarfaha quruxda badan.
Mid kastaa wuxuu u shaqeeyaa si ka duwan, laakiin waxaad tijaabin kartaa si aad u aragto haddii natiijadu ay u shaqeyso boostaradaada.
Xarfaha quruxda badan ee boodhadhka oo aad soo dejisan karto
Sida aan ognahay in aanad mar walba haysan wakhti (ama xirfad) aad ku samayso xarfaha quruxda badan ee naqshadahaaga, waxaanu soo diyaarinay qaar ka mid ah kuwa ugu asalka ah ee aan aragnay oo loo isticmaali karo boostadaada (waxay kuxirantahay inay yihiin hal dhegeystayaal ama mid kale).
Aad baan u jecelnahay ishan sababtoo ah Xarfaha mid kastaa waa xayawaan loo dhigay qaab xaraf ah. Markaa waxaad haysataa laba adeegsi: dhinac, in la akhriyi karo (meel fog bay si fiican wax u akhridaa); iyo, dhanka kale, u adeegaya sidii sawir laftiisa.
Waad heli kartaa Halkan.
Mid kale oo aan aad u jecelnahay waa kan Waxay kuu ogolaaneysaa inaad isticmaasho kiis sare iyo hoose, midabyo iyo xitaa u dhigma xarfaha natiijooyin kala duwan. Inkasta oo lagu taliyay carruurta, waxa kale oo loo isticmaali karaa ganacsiyada la xidhiidha carruurta, dukaamada buugaagta, dukaamada nacnaca, iwm.
Tani waa ku fiican ciwaanada ama kelmado ama odhaah aad u gaaban (ciwaan). sababtoo ah haddii aad si xun u isticmaasho, boodhka ayaa noqon doona mid mashquul ah.
Waxay leedahay qaab dugsiyeed hore laakiin aad u casri ah, markaa waxay noqon kartaa wax la isticmaalo.
Bloom qurux badan
Tani waa mid ka mid ah kuwan wax badan oo u eg xaraf iyo waxa aad u gudbin karto sida. Waxaan ka jecelnahay wax walba quruxdaas laakiin, goorma, sababtoo ah sida aad arki karto dhammaan xarfaha ayaa la isku daraa taasina waxay adkeyn kartaa akhriska haddii qoraalku ku badan yahay.
Xaaladdan oo kale, iyo sidoo kale isha in iska dhigaya in gacanta lagu qoray, sidoo kale waxay leedahay gunno leh sawirro ubax. Waxay ku habboonaan lahayd boodhadhka raadinaya dareenkaas ah in la abuuray iyada oo aan lahayn kombuyuutar ama xarfo, laakiin daaha gadaashiisa waxaan ognahay in tani aysan ahayn xaaladdu.
Talooyin loogu talagalay doorashada xarfaha quruxda badan ee boodhadhka
Hadda oo aan kuu sheegnay sida loo sameeyo xarfaha quruxda badan ee boodhadhka, waa inaan ku siinaa digniin. Waana taas, sida quruxda badan ee ay u soo baxdo, haddii marka aad dhejiso boodhkaas dadku aanay awoodin inay akhriyaan waxa ku qoran qoraalka, ama waa inay joojiyaan waqti dheer si ay "u ogaadaan", markaa waxaa laga yaabaa inaad samaysay qalad weyn.
Barta boodhka ayaa ah in lagu soo jiito dareenka, haa. Laakin sido kale in aad ka warbixiso wax gudaha ku jira, ha noqoto dhacdo, foom, balan iwm. Haddii aadan taas helin, si kasta oo ay u qurux badan tahay, dadku waxay kaliya u qaadan doonaan "sawir".
Sidaa darteed, markaad warqad u dirayso boodhadhka, maskaxda ku hay waxyaabaha soo socda:
Mararka qaarkood fudud ayaa ugu fiican. Sidan ayaad u hubisaa in fariintaadu ay si dhab ah u gaadhay kuwa arkaya boodhkaaga.
Ku ciyaar midabyo, laakiin ma aha oo kaliya xarfaha, laakiin sidoo kale sawirada. Waa habka ay sawiradu isugu dheelitiran yihiin waxaad rabto inaad xayeysiiso.
Ka digtoonow meesha boodhka lagu dhejin doono. Calaamad ku sudhan albaabka ama daaqada dukaanku la mid maaha mid ka mid noqon doonta boodhka ganacsiga. Waxaas oo dhami waxay saameyn ku yeelan doonaan nooca font si aad u doorato maadaama laga yaabo inay taasi, ka sii fogaato, ay aad u dhib badan tahay in la fahmo.
Dhammaan waxa la sheegayo, miyaad ka fikirtay sida loo sameeyo xarfo qurux badan oo loogu talagalay boodhadhka asalka ah, hal-abuurka leh oo daboolaya baahiyaha qoraallada si ay u muuqdaan kuwo wanaagsan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Sida loo sameeyo xarfaha quruxda badan ee boodhadhka